-ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ‌တော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) နှင့် ချင်းအ… – PVTV Myanmar
-ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ‌တော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) နှင့် ချင်းအ…
-ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ‌တော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) နှင့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) တို့အကြား အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖော်ဆောင်ကျင့်သုံးရေးအတွက် နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုး
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ ပူးတွဲကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
-အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မြန်မာလူထုရဲ့ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံက တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။ မြန်မာ့အရေး ဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက အထူးအရေးပါပြီး အထူးကိုယ်စားလှယ် Burgener နဲ့ လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားချင်ပါတယ်” လို့ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Toshimitsu Motegi က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်
-မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက် စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံထဲက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို နေထိုင်ခွင့် ၆ လ ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီး ဂျပန်တရားရေးဝန်ကြီး Yoko Kamikawa က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် စတဲ့ PVTV ရဲ့ ညနေပိုင်း သတင်းအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 8.7K Share – 690
2021-05-29 at 9:05 PM
2021-05-29 at 9:06 PM
We’ld like to see aswift change of our country intoahigh morality and developed country like your’s. Thanks Japan and Japanese people.
2021-05-29 at 9:13 PM
2021-05-29 at 9:21 PM
2021-05-29 at 9:48 PM
2021-05-29 at 9:59 PM
Nway Oo Yadana says:
2021-05-29 at 10:07 PM
Ko Min Heing says:
2021-05-29 at 10:20 PM
Jacky HlaPhyo says:
2021-05-29 at 10:22 PM
U Tay Zar says:
2021-05-29 at 10:39 PM
တိုင်း ပြည်ရဲ့အင်အားစုတွေ ပေါင်းစည်းတဲ့အခါ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများရဲ့အင်အားဟာ အလွန်အရေးပါ ပါတယ်၊ပေါင်းစည်းခြင်းတွေအတွက်လည်းအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
2021-05-29 at 11:00 PM
2021-05-29 at 11:01 PM
2021-05-29 at 11:14 PM
2021-05-30 at 12:00 AM
Othwe Othwe says:
2021-05-30 at 12:15 AM
2021-05-30 at 2:52 AM
ႏိုင္ရမည္ ႏိုင္မည္စိုတဲ ယံုက်ိခ်က္နဲတိုက္ေနတာ
2021-05-30 at 5:55 AM
ဖေဖေ ချစ်တဲ့သမီးလေး says:
2021-05-30 at 6:34 AM
2021-05-30 at 7:09 AM
2021-05-30 at 9:02 AM
2021-05-30 at 10:37 AM
NUG အစိုးရအားကြိုဆိုထောက်ခံပါသည် အမြန်ဆုံး အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်ပါစေ အန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းကြပါစေ
2021-05-30 at 7:49 PM
2021-05-31 at 10:47 AM
2021-07-22 at 4:06 PM